नेपालमा दैनिक कति मोबाइल भित्रन्छन् ? - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौंः नेपालमा दैनिक औसत १८ हजार थान मोबाइल भित्रिने गरेको पाइएको छ । चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनासम्मको भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार औसतमा उक्त संख्या बराबरको मोबाइल दैनिक आयात हुने गरेको हो । विभागका अनुसार असोजसम्म सात अर्ब १९ करोड रुपियाँ बराबरका १६ लाख २३ हजार ७९५ थान मोबाइल आयात भएका छन् ।
याे पनि पढ्नुस ढुक्क भएर काम गर्न नीजि क्षेत्रलाई अर्थमन्त्री खतिवडाको आग्रह
विभागका अनुसार समीक्षा अवधिमा सबैभन्दा धेरै चीनबाट मोबाइल आयात भएको छ । त्यहाँबाट मात्रै तीन अर्ब ३३ करोड रुपियाँ बराबरको १२ लाख ८४ हजार थान मोबाइल नेपाल भित्रिएका छन् । चीनका हुवावे, सायोमी, ओप्पो, वनप्लस, भीभोलगायतका मोबाइल नेपालमा बढी प्रचलनमा छन् । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
याे पनि पढ्नुस आफ्नो फोन उठाएको भन्दै श्रीमतीको हत्या!
ट्याग्स: भन्सार विभाग, मोबाइल